IINGOMA EZILISHUMI ELINESIBINI EZICAPHUKISAYO ZEKRISIMESI - KRISIMESI
Ibritish Enkulu Ibhaka
I-Alice Kulungelelwaniso Lweetshathi
Ukuziphatha Kakubi Ngokwesondo
Iingoma ezilishumi elinesibini ezicaphukisayo zeKrisimesi
Yilelo xesha lonyaka, xa umhlaba uthandana, yonke ingoma oyivayo ibonakala ngathi yeKhisimusi. Ewe, umculo weholide kunzima ukubaleka. Nokuba uneengoma eziqhushumileyo ukusukela nge-1 kaNovemba (sukundigweba) okanye ubabambe evenkileni okanye ebhankini okanye mall okanye kwiofisi kagqirha okanye ngokoqobo naphi na esidlangalaleni, lixesha lomculo weKrisimesi. Kwaye siyayithanda! Ngaphandle kweetoni ezimbalwa zokhetho esithanda ukuba uSanta azigcine kwisileyi.
Ke, sijoyine njengoko sihambisa i-grinch yethu yangaphakathi kunye nokubala eyona ngoma imbi kakhulu, ikhathaza iKrisimesi.
12. Iintsuku ezilishumi elinesibini zeKrismesi
Le chestnut indala singathanda ukuwosa kumlilo ovulekileyo ayisiyonto yeholide yeebhotile ezingama-99 zebhiya kodwa yingxelo yezona zipho zimbi… Amakhonkco egolide amahlanu mahle, aqinisekile kodwa akukho mntu ufuna i-BIRDS yeKrisimesi ngakumbi amarhanisi, inyoni yenyani yobubi.
Kwaye uthando lwenene lunika… abantu? Ngaba le yingoma emalunga nobukhoboka okanye ukubulala okanye uthando lwenene lwaqesha amantombazana asibhozo kubisi kwaye okwexeshana elifutshane kuphela ngeKrisimesi? Le mibuzo ifuna iimpendulo!
11. Ngumntwana Onjani Lo?
Le yenza uluhlu olusezantsi kuba ngelixa lihle zii-Greensleeve nje ezifihle ngokuzenza ingoma yeKrisimesi. Okunye okukhoyo kwesi slot yayiyile: uguqulo olungaqhelekanga lwe-canon kaPacabel enamazwi ngoYesu (sisixhobo esisebenzayo!), Uhlobo olungeyonyani lukaCarol weeBell ezineengoma ezingachanekanga (yayisele ikho malunga neKrisimesi!) Kunye nezinto endizithandayo. akhonto yokwenza neKrisimesi tu !!!
10. Ngokulula ukuba nexesha elimnandi leKrisimesi
Esi slot sasinokuya ngokulula kuFeliz Navidad okanye kulo naliphi na inani leetoni zeKrisimesi ezikhubekisa iindlebe zethu kwaye sibambe impilo yethu ngenxa yokuphindaphindeka, okukruqulayo nokuphindaphinda kwabo. Lo uthatha ibhaso nangona kunjalo kuba ayisiyonto inye iphindaphindiweyo, umculo ophindaphindiweyo umangalisa kakhulu buthuntu . I-80s synth yenza nje iidrones ezinje ngeDisneyland Electrical Parade ngaphandle kwamandla okanye umtsalane.
9. Ndabona uMama encamisana noSanta Claus
Ingoma ngokwayo iyothusa. Kutheni le nto umntwana engakhathazeki ngokubamba umama kwisenzo sokungathembeki? Bekuza kwenzeka ntoni ukuba tata ndinayo ungene? Nalo: usisidenge kanjani lomntwana? Yintoni eyenza ukuva le ngoma kongezeleleke ngeli xesha lonyaka yinguqulelo esihlala siyifumana, leyo iculwa nguJackson 5.
Ndibize ngokuba krwada kodwa andifuni kuva iingoma zeKrisimesi ezithi zihlabelele kamnandi ngumntwana oye wakhula etyholwa ngokuxhaphaza abantwana abaninzi ngokwesondo! Ewe oku kuyasebenza kuhlobo lweJackson 5 kaSanta Claus uyeza naseKapa!
8. USanta Umhlobo
Ewe, ndiyabheja ubucinga ukuba siza kungena ngakumbi kuBantwana Kuyabanda Ngaphandle kwintetho. Kodwa hayi, sele yenziwe kwaye ngoku sithetha ngeengoma ezikhoyo Iyacaphukisa . Ewe, kukho iinguqulelo ezicaphukisayo zaloo ngoma ziyithatha ngokukhawuleza itempo kwaye ziyiguqule ibe sisiphithiphithi endaweni yesinxibo esimnandi apho intombazana ifuna ukuhlala khona. (Nceda unike Inguqulelo kaRay Charles kunye noBetty Carter mamela ukuba ufuna ukuva ukuba ingaba ilunge kangakanani le ngoma xa yenziwe kakuhle).
Kodwa silapha ukuze sithethe malunga nokuthambekela okungaqhelekanga kwamadoda ukugubungela uSanta Baby-eyona ngoma yesondo kunye neyona ingxowankulu yexesha! - kwaye uyijike ibe yiSanta Buddy kuba boyika ukuvakala ukuba bayathandana! Isisimumu! Iyacaphukisa! Ingoma iphela imalunga nokudlala ngothando noSanta ukuze ufumane izipho ezibizayo ukuze, eyakho!
7. IHaleluya Chorus
Mamela, sisiqwengana somculo kwaye lilungelo lakho ukulithanda, kodwa abo kuthi banyanzelwe amaxesha amaninzi ukuba bacule isoprano yesibini kolu monstrosity bayazi inyani: UGeorg Friedrich Hadel wayengumntu onobuhlungu owathiyileyo yonke imvumi awakha wayibhala umculo oqulunqwe ngabom owawungadinisi nje kodwa kubuhlungu emzimbeni ukucula!
Ewe, njengemvumi ndinenkomo yobuqu kunye nale klasiki kwaye ewe, ibuyela kwiminyaka yoxinzelelo kwitessitura yam, kodwa ndiyazi ukuba andindedwa phakathi kweemvumi kunye nabalandeli bakudala abaya kwindawo emnyama nanini na xa sisiva ezo Iingoma zokuqala zokuphumelela.
6. Iintsimbi zesilivere
Le snorefest, endiyivileyo ibhanti ngeendlela ezininzi ezimbi, iyacaphukisa ngakumbi kuba yayiphefumlelwe, ithiyori, ngeentsimbi zeSalvation Army Santas kwaye isebenza njengekhadi lokufowuna kulo mbutho. Yintoni ephosakeleyo kuloo nto, ubuza?
Ewe, uMkhosi woSindiso unawo irekhodi elibi kakhulu kunye noluntu lwe-LGBTQ , ukwala ukuvumela amalungu ukuba afake abantu kwaye ngamanye amaxesha angavumi iinkonzo. Kukho iingoma ezingcono kunye neendawo ezingcono zokunika imali nazo.
5. Dominic Idonki
Lo mntu mhlawumbi waziwa kancinci kancinci kunabanye abakolu luhlu kwaye uyabulela uthixo ngaloo nto, kuba eli lisikizi nje… loyikekayo. Ayakhiwanga kuphela kwiingcinga ezikhohlakeleyo zase-Italiya, ikwafumene ihee enkulu! hee haw! into eyisa kwinqanaba elitsha ngokupheleleyo lobubi obubi.
4. Ngaba bayazi ukuba yiKrisimesi?
Njengezinto ezininzi kwii-80s, le yenziwe ngeenjongo ezintle kodwa yasinika iziphumo ezi-super-cringey ngoku. I-Band Aid yenziwa kwi-1984 njengeqela leenkwenkwezi zonke ezazifumaneka e-UK kwaye inyuse imali eninzi kumaxhoba endlala e-Afrika, kwaye yazala i-Live Aid… kodwa ukumamela amazwi ootata malunga nendlela ekungayi kubakho khephu ngayo e-Afrika kule Krismesi njengemvumi emhlophe ikakhulu ezibuza ukuba ingaba abantu Izwekazi elingayibhiyozeliyo iKrisimesi yazi ukuba lixesha leKrisimesi kwaphela… ayisiyiyo inkangeleko entle kwakhona.
3. Umakhulu Ubalekile NgokweReindeer
Akukho nto injengokubulala okulula ukukufumana kumoya weholide! Konke esikutshoyo kukuba kukho isizathu sokuba le ibe yenye yeengoma ezimbini abazidlalayo kaninzi esihogweni Indawo elungileyo.
Inkunkuma yokudlala iyathetha umfazi kwi-intanethi
2. Izihlangu zeKrisimesi
Hayi ukubulala ngeli xesha, kodwa ukufa! Ukunyanzeliswa ngokwasemphefumlweni, UKUFA!
Le ngoma imbi ayipheleli nje ekufeni komama womntwana ngeKrisimesi, ikwa malunga nokuthenga kunye nemilinganiselo yobuhle kwabasetyhini kuba lo mntwana ulihlwempu ufuna nje ukufumana izihlangu zikamama wakhe angakhangeleka emhle kuYesu xa esweleka ngeKrisimesi ! UKUDLULA!
1. Ndifuna Imvubu yeKrismesi
Le ngoma… Le ngoma ehlekisayo. Ibetha onke amanqaku angalunganga ngazo zonke iindlela ezimbi. Ubuyatha babathengi. Ukuphindaphinda okunokuthumela kwimeko yokubaleka yokoqobo. Imvumi enelizwi elicaphukisayo yenza ukuba ulangazelele i-chipmunk. Le ngoma ayisiyiyo ingoma yeKrismesi ecaphukisa lonke ixesha… isekubalekeni
Olu luluhlu lwethu, Suvians. Ngaba kukhona into esiyiphosileyo? Isandi sivakale kumagqabaza!
(umfanekiso: Abazalwana bakaWarner)
Izixhobo ezinkulu zeetanki zentlanzi
kutheni ilokhi ithandwa kangaka
awunakucacisa loo meme
Kufuneka uyikhumbule le ngoma
Ngaba u-bella swan umangalele uMary
I-wynonna earp yexesha 1 isiqendu 7
Itheyetha yabantwana kunye noTom Hanks